जुम्लीसँग महिला सिडियोको स्यालुट ! (शब्द तस्विर) - Nepal's Digital News Paper
जुम्लीसँग महिला सिडियोको स्यालुट ! (शब्द तस्विर)
काठमाडौं । तीन तहका सरकारमा जिल्लाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्र सरकारको मुख्य प्रशासक हो । मुख्य प्रशासक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफ्ना गुनासा लिएर जान सवैलाई सजिलो हुँदैन । त्यो पनि कर्णाली जस्तो विकट ठाउँका महिला आफ्नो गुनासो लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा कहिले पुग्लान ?
यो तथ्य अब पुरानो हुँदैछ । तथ्यलाई सत्य बदलिन जुम्ली सिडियो दुर्गा बन्जाडेले । केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिकारुपमा जुम्ला जिल्लाको प्रशासन चलाइरहेकी छिन् बन्जाडेले । तर मंगलवार उनको कार्यकक्षमा नयाँ अभ्यास शूरु गरिन ।
विहानको ११ बजेको थियो । त्यही बेला एक बृद्ध र एक अधबैसे जुम्ली महिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आँगनमा वसिरहेकी थिइन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुडासैनीको नजर उनीमाथी परयो । तत्कालै आफ्नो कक्षमा बोलाइन । शिर निहुँराएर दुई जुम्ली महिलालाई नमस्कार गरिन । जुम्ली महिलाले पनि आदरसाथ सिडिओलाई दुई हात जोडेर नमस्कार फर्काए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुडासैनीले दुई महिलालाई किन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएको ? भन्दै प्रश्न गरिन । उनीहरुले आफ्ना समस्या बताए । लगतै उनले काम गर्न अन्य कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन । दुई जुम्ली महिलालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बसालिन र चिया खुवाइन । चिया मात्र हैन, उनीहरुसँग भावना साट्ना अंगालो हालिन र तस्वीर खिच्न लगाइन । दुई जुम्ली महिलाले पनि सिडियोसँग बसेर तस्विर खिचाँउँदै हर्षत बने ।
सिडियो कार्यशैलीले जुम्ली महिलामा खुसीको सञ्चार गरयो । चिया खाएपछि जुम्ली महिलाले आफ्ना दुखका कथाहरु सुनाए । प्रजिअ पुनासैनीले पनि उनीहरुका कथा सुनिन् । छोराभन्दा छोरीलाई बिद्यालय पठाउन र आफुजस्तो यही कुर्सीमा बस्ने बनाउन आग्रह गरिन ।
जुम्ली महिलासँगका तस्विर उनले मंगलबार साँझ आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरिन । जनतासँग प्रशासकलाई जोड्न उनले जुम्लाबासीहरुसँग यस्तो कार्यको थालनी गरेकी छिन् । बृद्ध बृद्धासँग उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दैनिक भेटघाट गर्ने गरेकी छिन् ।